Voice Notify 1.1.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Voice Notify
Voice Notify ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
UPDATE NOTICE: Google [threatened to make]achange to policy requiring VN to stop using the Accessibility service. It was replaced with the Notification Listener service in v1.1.0. This resulted in some changes that may not be desired, such as the removal of the toast option or speaking every notification update instead of only new notifications. I cannot guarantee that everything will be restored in the future. In the meantime, if you don't like v1.1.x, I would suggest leaving detailed feedback and sideloading v1.0.12 from GitHub to restore the old functionality and behavior.
*Limit length of spoken message
*Replace text to be spoken
VN operates through Android's Notification Listener service and must be enabled in the Notification Access settings.
Shortcuts are provided in the configuration screen to open the Notification Access and TTS settings.
Vibrate - Required for Test feature while phone is in vibrate mode.
Modify Audio Settings - Required for improved wired headset detection.
Read Phone State - Required to interrupt TTS ifaphone call becomes active.
Voice Notify developers are not responsible for the notifications that are announced. It is up to you to configure VN or your device, or not use VN, to prevent unwanted announcing of notifications.
Please email me or submit any issues at:
If necessary, you can sideload any version from the releases section on GitHub:
Code contributor details can be found at https://github.com/pilot51/voicenotify/graphs/contributors
Current languages: English, Czech, Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Malay, Polish, Portuguese, Russian, Spanish
A special thank you to all the developers and translators who donated their time and expertise to make Voice Notify better!
Voice ကိုစာသား-To-Speech (၏ TTS) ကို အသုံးပြု. ပြ status bar အကြောင်းကြားစာမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြေညာဒီတော့သင်ကအသိပေးချက်ကိုအဘယ်သို့မိန့်တော်ကိုသိရန်ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအကြောင်းကြား။
UPDATE အသိပေးစာ: Google က Accessibility ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ဖို့ VN လိုအပ်မူဝါဒအပြောင်းအလဲ [စေရန်ခြိမ်းခြောက်] ။ ဒါဟာ v1.1.0 အတွက်သတိပေးချက်နားထောင်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုနဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအကင် option ကိုဖယ်ရှားရေးသို့မဟုတ်အစားသာအသိပေးချက်အသစ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအကြောင်းကြားစာ update ကိုစကားပြောအဖြစ်တပ်မက်လိုချင်သောအမရစေခြင်းငှါအချို့အပြောင်းအလဲခဲ့သည်။ ငါအရာအားလုံးအနာဂတျတှငျပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျအာမခံလို့မရပါဘူး။ သငျသညျ v1.1.x မကြိုက်ဘူးလျှင်ထိုအတောအတွင်း, ငါသည်အဟောင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အပြုအမူ restore လုပ်ဖို့ GitHub ကနေအသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် sideloading v1.0.12 ထွက်ခွာအကြံပြုလိမ့်မယ်။
VN ရပ်ဆိုင်းထားရန် * Widget လေး
* စိတ်ကြိုက်၏ TTS သတင်းစကား
ပြောပြီသတင်းစကားများ * ကန့်သတ်အရှည်
သတ်မှတ်စာသားကို် * လျစ်လျူရှုတိကျတဲ့ apps များသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာများ
၏ TTS ဒီယိုစီး၏ * ရွေးချယ်မှု
မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်နားကြပ်သို့မဟုတ်ပိတ်, ဒါမှမဟုတ်အသံတိတ် / တုန်ခါ mode မှာနေစဉ်အခါစကားပြော၏ * ရွေးချယ်မှု
(မှတ်ချက်: ကြောင့် API ကိုကန့်သတ်ခြင်း, VN လက်ရှိပြည်နယ်ကြည့်ဖို့အတှကျ VN ဝန်ဆောင်မှုစတင်လိုက်တာနဲ့ချိတ်ဆက်သောနားကြပ်ကော်နက်ရှင်ခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်; ကိုလည်းအားလုံး Bluetooth ကိရိယာများအတူတူ, နားကြပ်သို့မဟုတ်မတွေ့ရှိကြသည်)
အကြောင်းကြားစာပြီးနောက်၏ TTS ၏ * စိတ်တိုင်းကျနှောင့်နှေး
VN Android ရဲ့သတိပေးချက်နားထောင်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်လည်ပတ်နှင့်သတိပေးချက် Access ကို setting တွင်ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
shortcuts အဆိုပါသတိပေးချက် Access ကိုနှင့် TTS သတ်မှတ်ချက်များဖွင့်ဖို့စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမျက်နှာပြင်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ဘလူးတုသ် - Bluetooth နားကြပ်ချိတ်ဆက်ရှိမရှိ detect လုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့။
တုန်ခါမှု - ဖုန်းကိုတုန်ခါ mode မှာနေစဉ်စမ်းသပ်အင်္ဂါရပ်များအတွက်လိုအပ်သော။
အသံချိန်ညှိချက်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံ - တိုးတက်ကြိုးနားကြပ်ထောက်လှမ်းဘို့တောင်းဆိုနေတဲ့။
ဖုန်းပြည်နယ် Read - ဖုန်းခေါ်ဆိုခတက်ကြွဖြစ်လာလျှင်၏ TTS ကြားဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့။
audio streaming options အကြောင်း:
အသံစီး၏အပြုအမူကိရိယာသို့မဟုတ် Android ဗားရှင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သောစမ်းချောင်းဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်နေတာအကြံပြုသည်။ အဆိုပါမီဒီယာစီး (ပုံသေ) လူအများစုအဘို့ကောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။
Voice ကို developer များထုတ်ပြန်ကြေညာသောအကြောင်းကြားစာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်အကြောင်းကြား။ ဒါဟာအကြောင်းကြားစာများ၏ကြေညာမလိုချင်တဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့, VN သို့မဟုတ်သင့် device ကို configure ရန်သင့်အားမှတက်သည်, သို့မဟုတ် VN မသုံး။
လိုအပ်သောလျှင်, သင် GitHub ပေါ်တွင်ဖြန့်ချိအပိုင်းကနေမဆိုဗားရှင်း sideload နိုင်သည်
VN ဟာ Apache ကို License အောက်တွင်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ https://github.com/pilot51/voicenotify
Code ကိုပံ့ပိုးအသေးစိတ်ကို https://github.com/pilot51/voicenotify/graphs/contributors မှာတွေ့နိုင်ပါသည်
ဘာသာပြန်ချက် http://getlocalization.com/voicenotify မှာ crowdsourced ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်သို့မဟုတ် Localization Get အသုံးပြုချင်ကြဘူးမနိုင်လျှင်, သင်အမြဲငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ် GitHub စီမံကိန်းကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, ခကျြ, ဒတျချြ, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဂရိ, ဟနျဂရေီ, အငျဒိုနီးရှား, အီတလီ, မလေး, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ရုရှ, စပိနျ
အထူး Voice ကိုပိုကောင်းအကြောင်းကြားစေရန်မိမိတို့၏အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည် developer များနှင့်ဘာသာပြန်များရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်!
Voice Notify အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Voice Notify အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3491.43M
Voice Notify ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Voice Notify အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.3
App Name: Voice Notify
File Size: 477.5kB
Release date: 2018-04-23 04:06:03
လက်မှတ် SHA1: 42:11:2B:5A:51:AE:D9:B2:E2:C4:99:20:83:A7:59:9C:45:06:79:C2
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Michigan
Voice Notify APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ